भारतीय न्यूज च्यानल मात्रै बन्द गर्ने कि अरु सामाजीक संजाल पनि ? - सिम्रिक खबर
भारतीय न्यूज च्यानल मात्रै बन्द गर्ने कि अरु सामाजीक संजाल पनि ?
भारत पाकिस्तान बिचको १९४७ को युद्ध पछी भारत र पाकिस्तानका मिडियाहरुमा एक अर्काप्रति वाक युद्ध चलिरहयो । एक अर्का प्रति होच्याउने प्रबृतिका न्युजहरु दुबै पक्षबाट आउन थाले । त्यस्तैगरी भारत र चिनको १९६२ को युद्ध पछी भारतिय मिडियाहरुले चाईनाको बारेमा पनि त्यस्तै प्रकारका न्युजहरु प्रकाशन गर्न थाले ।
हुँदा हुदा भारतिय पत्रकारहरुले आफ्नो पत्रकारीताको धर्म बिर्सिएर च्यानलको टिआरपी बढाउने उदेश्यले उत्तेजनात्मक गालीगलौज र प्रपोगाण्डा सहितका सामाग्रीहरुलाई महत्व दिन थाले ।
हाल नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो नभएका बेला सम्पुर्ण भारतीय मिडियाहरु नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलि बिरुद्ध बिभिन्न प्रपोगाण्डा सहित तल्लो स्तरमा लागी परेका छन । द टाईम्स अफ ईण्डीयाले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डीलमा प्रम ओली विरुद्ध “नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो कुरा अनुभूति गर्ने बेला आयो कि नेपालको समस्या भारतसंग होईन, उनी आँफैसंग छ” भनी ट्वीट गर्यो ।
यसैगरि भारतीय च्यानल जी न्यूजले प्रशारण गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलि र नेपालका लागी चाइनाका राजदुत याङ्की बारेको कपोकल्पीत समाचार भाइरल भएपछि बिदेशि च्यानल बितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर ले नेपालमा दुरदर्शन बाहेकका भारतिय समाचार च्यानल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन ।
तर भारतीय वेब पत्रिकाहरु, उनीहरुको फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउण्ड र न्युज च्यानलका आधिकारीक युवटुब च्यानलहरु निर्बाद रुपमा नेपालमा चलिरहेको छन् । अहिले मानिसहरुले टेभिजन भन्दा सामाजिक संजाल, बेव पत्रिका र युट्युब च्यानलहरुलाई सूचनाको श्रोत मानिरहँदा के सामाचार च्यानल बन्द गर्ने निर्णय प्रभावकारि होला ? बन्द नै समाधान हो कि त्यसभन्दा पछाडी को अर्को एक्सन के हो ? सूचना तथा संचार मन्त्रालयले यसबारेमा धारणा दिनु जरुरि छ । साथै यो बन्द कहिले सम्म हो, कि विरोधका लागि विरोध मात्र ?